Zvinokwanisika here kuwana backlink kubva paWeb10 websites?
Zvichida zvinonzwika zvakanyanya kuti zvive chokwadi. Zvisinei, zvinhu zvose ndezvechokwadi kana iwe uine nzira yakanakisisa yedambudziko. Iwe unofanirwa kuziva kuti kune mikana yakawanda yekuwana PR 10 backlinks zuva rimwe nerimwe. Zvose zvaunoda ndezvokuti uchengete meso ako nenzeve zvizarurire nguva dzose zvinoramba zvichitevera mikana mitsva yekuvakidzana. Zvinonzwisisika kuedza maitiro ekugadzira mazano anobatsira kupfuura kugadzirirwa kwevaeni kana kuti mazano anobatsira kuwana hukuru hweP PR.
Ngatikurukurei nzira dzinogona kuwanikwa dzekutora PR10 backlinks. Vamwe webmasters vanowanzodavira kuti nzira chete yekuwana zvikwata zvepamusoro zvakakosha ndeyekubudisa zvinyorwa zvinonakidza. Kana yako zvinyorwa zvichishanda, iwe uchawana huni hwehutano hwekunze hunoenderana. Zvisinei, hazvisi kure. Ichashanda mumagumo, asi ndiani ane nguva yakadaro yekumirira. Imwe nzira yakawanda yekuvaka PR10 backlinks ndeyekugadzira zvinyorwa zvakanyanya uye kuita purogiramu yekuparidzira mukati mechikwata chako chemusika uchikumbira vadzidzisi vewebhu uye mablogi kuti vauye kwauri.
Zvisinei,. Chokutanga pane zvose, hazvisi nyore kugadzira zvinyorwa zvinonakidza kupa vashandisi neruzivo rwavasina kumbonzwa kare. Zvinotora nguva yakawanda uye kuedza kuita zvinhu zvakadaro zvakagadzirwa. Imwe dambudziko nderokuti kana zvinyorwa zvako zvisingabatanidzi zvakakodzera. Muchiitiko ichi, unogona kutarisa pamapakati kana pasi-yakanakisa web sources. Outreach haishandi mumamiriro ezvinhu aya. Uyezve, pfungwa dzinokurudzira dzinogamuchira zvikumbiro zvakawanda zvekubatanidza mikana yekuvaka zuva nezuva. Muzviitiko zvakawanda, vanongodarika zvikumbiro zvenyu pasina kunyange kuverenga zviri mukati.
Mhinduro yakakwana uye, nenzira, hupenyu hwangu credo, ndechokuti uite zvose iwe pachako usina kuvimba nevamwe. Regai tinyatsotarisisa kuti inoshanda sei.
Ita yako backlinks
Inogona kuve yakangwara, asi iwe unogona kuisa yako backlinks kune mamwe maPiraneti makuru eR. Semuenzaniso, ini ndine hanya nemutauro weR PR 10 wakadaro seGoogle, Reddit, Facebook, LinkedIn, YouTube, nevamwe. Aya masayiti achakubvumira kuti iwe ugadzire iwe unhu hwepamusoro-soro, hunobatsira kumashure uye unovandudza nzvimbo yako yepaiti. Iwe haugoni kungoisa chibvumirano chako pazvikwata zvepawebhu zvakakurumbira. Iwe unofanirwa kuumba yakakodzera, yakakwirira-yepamusoro, uye yakakosha kuvapo pane imwe yezvi nzvimbo uye chete uchisiya backlinks yako ikoko. Iwe unofanirwa kuumba purogiramu yakanaka uye uizadze iyo nehuwandu hwemashoko akakodzera. Basa rako rekutanga ririkugadzira zvakawanda zvehutano izvo zvinoenderana nehutano hwako. Nokuita kudaro, iwe uchaita kuti hukama hwako huve nesimba uye mamiriro ezvinhu.
Panzvimbo inotevera, unofanirwa kuumba hukama pakati pemhando dzose dzewebhu apo peji yako iripo. Nemuenzaniso, kana iwe uchidhinda mutsva mutsva paIndaneti, unofanira kufambidzana nayo kubva ku LinkedIn yako, Instagram, Pinterest, Twitter, uye dzimwe nhoroondo. Uye ndima yepiri, kuitira kuti mapeji ose aine backlinks. Somugumisiro, iwe uchawana PR 10 yakakura backlinks nekuedza kwako usingashandisi chero zana Source .